ကနဒေါမှာ ကြောငျးတကျဖို့ မွနျမာကြောငျးသားတှကေို သီးသနျ့ပေးမယျ့ FULL SCHOLARSHIP
ဒီလို English Speaking Countries တှမှော ပေးတဲ့ Undergraduate Scholarship က အလှနျရှားပါတယျ။ မရှိဘူးလို့တောငျ ပွောလို့ရပါတယျ။ ဘာလို့ရှားလညျးဆိုတော့ ကြောငျးစရိတျနဲ့ နထေိုငျစားသောကျစရိတျက အရမျးကို ဈေးကွီးလို့ပါ။ ခုစကောလားရှဈပေးမယျ့သညျကြောငျးမှာ ကိုယျ့ပိုကျဆံနဲ့ကိုသှားတကျမယျဆိုရငျ တဈနှဈကို အနညျးဆုံး မွနျမာငှေ သိနျး ၅၀၀ လောကျကုနျကမြှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီပညာသငျဆုမှာ ရှေးခယျြခံရပါက ကနဒေါမှာရှိတဲ့ Wilfrid Laurier University မှာ (၄) နှဈတာ တကျရောကျသငျယူရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကြောငျးစရိတျကို International Students Overcoming Wars (ISOW) ကထောကျပံ့ပေးမှာ ဖွဈပွီးတော့ လစဉျနထေိုငျစားသောကျစရိတျနဲ့ လယောဉျစရိတျကို Prospect Burma ကထောကျပံ့ပေးမှာဖွဈပါတယျ။
>>> ပွီးရငျ သညျပညာသငျဆုက မွနျမာကြောငျးသားတှကေို သီးသနျ့ပေးမှာပါ။ ကနဒေါမှာ ကြောငျးတကျဖို့ မွနျမာကြောငျးသားတှကေို သီးသနျ့ပေးတဲ့ စကောလားရှဈက ဒါပထမဆုံးပဲထငျတယျ။ ကတြျောတော့ ခုမှတှဖေူ့းတယျ။ အရငျတုနျးက မတှဖေူ့းဘူး။
>>> ဒီပညာသငျဆုလြှောကျဖို့ Application Fee လညျးမပေးရတာမို့ သခြောပွငျဆငျပွီး လြှောကျစခေငျြပါတယျ။
>>> IELTS တှကွေိုတငျပွငျဆငျထားကွနျော
>>> လြှောကျလို့ရတဲ့ မဂြောတှကေလညျး အမြားကွီးမှ အမြားကွီးပါပဲ။ Business, Environment, Education, Health, Computer Science, စတာတှေ ပါပါတယျ။ ကနဒေါမှာ ကြောငျးတကျခငျြတဲ့အိမျမကျတှရှေိရငျ အကောငျအထညျဖျောနိုငျကွပါစေ။
ဒီပညာသငျဆုနဲ့ ပတျသကျပွီး အသေးစိတျကို အောကျမှာ တတျနိုငျသလောကျ အရှငျးဆုံးရေးပေးထားပါတယျ။
•Business Administration (BA) & Computer Science (BCS) Double Degree
• Business Technology Management (BBTM)
• Digital Media & Journalism (BA)
•Law & Society (BA)
Ecology, Environment & Sustainability studies, Maritime Conservation
•Environmental study(BA) (MES)
•Social and Environmental Justice(BA)
•Business Administration(BA) & Finance Mathematics(BA) Double Degree
•Economic and Finance management(BA)
•Economic and Accounting(BA)
•Finance and Mathematics(BSc)
• Religion and Culture (BA)
• Cultural Studies (BA)
• Community Health (BA)
• Health Administration (BA)
• Health Science (BSc)
• Education (BEd)
• International Education Studies (BA)
(ဘာသာရပျတှမေကနျြအောငျ သခြောResearchလုပျပွီးတော့ ရှာထားပါတယျ။ အကယျလို့ကနျြခဲ့တာတှရှေိမှာစိုးလို့ Website ကနလေညျးရှာဖတျကွညျ့အုံးနျော)
• လကျရှိမွနျမာနိုငျငံတှငျ နထေိုငျလကျြရှိပွီး မွနျမာနိုငျငံတှငျ နထေိုငျသောသူကို ဦးစားပေး ရှေးခယျြပါမယျ။
• မိသားစုငှရေေွးကေးရေးအခကျအခဲရှိသူ ဖွဈရပါမယျ။
• ကြာငျးပွီးလို့ ဘှဲ့ရတဲ့အခါမှာ အမိမွနျမာနိုငျငံ ပွနျလာပွီး မွနျမာနိုငျငံ၏ဖှဲ့ဖွိုးတိုးတကျမှုဆိုငျရာ လုပျငနျးတှမှော တကျကွှစှာ ပါဝငျဖွညျ့ဆညျးကူညီပေးနိုငျလိုသူ ဖွဈရပါမယျ။
• ဆယျတနျးအမှတျ / နောကျဆုံးတကျရောကျခဲ့သော အတနျးရဲ့ အမှတျစာရငျး
• Recommendation Letter (၂) စောငျ
• IELTS, ...
•Prospect Burma Scholarship (ပညာသငျဆု)ကို အရငျဆုံးလြှောကျရပါမယျ။ ပညာသငျဆုအတှကျ ပဏာမစာရငျးထဲ ရှေးခယျြခံရမှသာ ကနဒေါက တက်ကသိုလျကို လြှောကျရပါမယျ။
လြှောကျနညျးအဆငျ့ဆငျ့ကိုအောကျမှာ Step by Step အသေးစိတျပွောထားပါတယျ။
⭕ STEP 1 : အပျေါကလိုအပျတဲ့စာရှကျစာတမျးတှစေုပါ။
⭕ STEP2: အကျဆေးရေးပါ။
အကျဆေး(၂) ပုဒျရေးရပါမယျ။ တဈပုဒျကို စာလုံးရေ - 500 Words
(1)BIOGRAPHY : Please explain how your personal and education journey has led you to this point of applying for this scholarship. Please provide information regarding how your skills, experiences, and interest relate to your degree and subject choice.
(2) FUTURE PLAN : Please tell us about your future plans and how you intend to benefit Myanmar after graduation. Please discuss this with reference to your chosen country of study, university, degree and subject.
⭕ STEP3: အပျေါကဟာပွငျဆငျပွီးသှားရငျ အောကျက Link ထဲဝငျပွီး လိုအပျတာတှကေို ဖွညျ့ပွီးတငျရုံပါပဲ။
Form မဖွညျ့ခငျမှာ (https://bit.ly/3rElCUS) Link ထဲဝငျပွီး သခြော အသေးစိတျဖတျရနျ အရေးကွီးပါတယျ။
သညျပညာသငျဆုလြှောကျဖို့အနညျးဆုံးရှိရမယျ့IELTS / TOEFLအမှတျကနျ့သတျခကျြမရှိပါဘူး။ ကြောငျးလြှောကျတဲ့အခါမှသာ IELTS / TOEFL အမှတျလိုတာပါ။ ကြောငျးလြှောကျမယျဆိုရငျတော့ IELTS စတာတှေ မဖွဈမနေ လိုပါတယျ။
•IELTS - 6.5 , TOEFL - 83,...
January 31st, 2021 (5:00 PM)
2021 မလေလယျမှာ အငျတာဗြူးဖွရေပါမယျ။
2021 ဇှနျလနောကျဆုံးပတျတှငျ Final Result သိရပါမယျ။
ပညာသငျဆုနဲ့ပတျသကျပွီး အသေးစိတျ သိရှိလိုပါက (https://bit.ly/2JrAy7j) Link ကနေ ဖတျနိုငျပါတယျ။
ကနေဒါမှာ ကျောင်းတက်ဖို့ မြန်မာကျောင်းသားတွေကို သီးသန့်ပေးမယ့် FULL SCHOLARSHIP
ဒီလို English Speaking Countries တွေမှာ ပေးတဲ့ Undergraduate Scholarship က အလွန်ရှားပါတယ်။ မရှိဘူးလို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာလို့ရှားလည်းဆိုတော့ ကျောင်းစရိတ်နဲ့ နေထိုင်စားသောက်စရိတ်က အရမ်းကို ဈေးကြီးလို့ပါ။ ခုစကောလားရှစ်ပေးမယ့်သည်ကျောင်းမှာ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုသွားတက်မယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်ကို အနည်းဆုံး မြန်မာငွေ သိန်း ၅၀၀ လောက်ကုန်ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပညာသင်ဆုမှာ ရွေးချယ်ခံရပါက ကနေဒါမှာရှိတဲ့ Wilfrid Laurier University မှာ (၄) နှစ်တာ တက်ရောက်သင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းစရိတ်ကို International Students Overcoming Wars (ISOW) ကထောက်ပံ့ပေးမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ လစဉ်နေထိုင်စားသောက်စရိတ်နဲ့ လေယာဉ်စရိတ်ကို Prospect Burma ကထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
>>> ပြီးရင် သည်ပညာသင်ဆုက မြန်မာကျောင်းသားတွေကို သီးသန့်ပေးမှာပါ။ ကနေဒါမှာ ကျောင်းတက်ဖို့ မြန်မာကျောင်းသားတွေကို သီးသန့်ပေးတဲ့ စကောလားရှစ်က ဒါပထမဆုံးပဲထင်တယ်။ ကျတော်တော့ ခုမှတွေ့ဖူးတယ်။ အရင်တုန်းက မတွေ့ဖူးဘူး။
>>> ဒီပညာသင်ဆုလျှောက်ဖို့ Application Fee လည်းမပေးရတာမို့ သေချာပြင်ဆင်ပြီး လျှောက်စေချင်ပါတယ်။
>>> IELTS တွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြနော်
>>> လျှောက်လို့ရတဲ့ မေဂျာတွေကလည်း အများကြီးမှ အများကြီးပါပဲ။ Business, Environment, Education, Health, Computer Science, စတာတွေ ပါပါတယ်။
ကနေဒါမှာ ကျောင်းတက်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေရှိရင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ကြပါစေ။
ဒီပညာသင်ဆုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ကို အောက်မှာ တတ်နိုင်သလောက် အရှင်းဆုံးရေးပေးထားပါတယ်။
(ဘာသာရပ်တွေမကျန်အောင် သေချာResearchလုပ်ပြီးတော့ ရှာထားပါတယ်။ အကယ်လို့ကျန်ခဲ့တာတွေရှိမှာစိုးလို့ Website ကနေလည်းရှာဖတ်ကြည့်အုံးနော်)
• လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်လျက်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သောသူကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ပါမယ်။
• မိသားစုငွေရေး​ကြေးရေးအခက်အခဲရှိသူ ဖြစ်ရပါမယ်။
• ကျာင်းပြီးလို့ ဘွဲ့ရတဲ့အခါမှာ အမိမြန်မာနိုင်ငံ ပြန်လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဖြည့်ဆည်းကူညီပေးနိုင်လိုသူ ဖြစ်ရပါမယ်။
• ဆယ်တန်းအမှတ် / နောက်ဆုံးတက်ရောက်ခဲ့သော အတန်းရဲ့ အမှတ်စာရင်း
• Recommendation Letter (၂) စောင်
•Prospect Burma Scholarship (ပညာသင်ဆု)ကို အရင်ဆုံးလျှောက်ရပါမယ်။ ပညာသင်ဆုအတွက် ပဏာမစာရင်းထဲ ရွေးချယ်ခံရမှသာ ကနေဒါက တက္ကသိုလ်ကို လျှောက်ရပါမယ်။
လျှောက်နည်းအဆင့်ဆင့်ကိုအောက်မှာ Step by Step အသေးစိတ်ပြောထားပါတယ်။
⭕ STEP 1 : အပေါ်ကလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေစုပါ။
⭕ STEP2: အက်ဆေးရေးပါ။
အက်ဆေး(၂) ပုဒ်ရေးရပါမယ်။ တစ်ပုဒ်ကို စာလုံးရေ - 500 Words
⭕ STEP3: အပေါ်ကဟာပြင်ဆင်ပြီးသွားရင် အောက်က Link ထဲဝင်ပြီး လိုအပ်တာတွေကို ဖြည့်ပြီးတင်ရုံပါပဲ။
Form မဖြည့်ခင်မှာ (https://bit.ly/3rElCUS) Link ထဲဝင်ပြီး သေချာ အသေးစိတ်ဖတ်ရန် အရေးကြီးပါတယ်။
သည်ပညာသင်ဆုလျှောက်ဖို့အနည်းဆုံးရှိရမယ့်IELTS / TOEFLအမှတ်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါဘူး။ ကျောင်းလျှောက်တဲ့အခါမှသာ IELTS / TOEFL အမှတ်လိုတာပါ။ ကျောင်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ IELTS စတာတွေ မဖြစ်မနေ လိုပါတယ်။
2021 မေလလယ်မှာ အင်တာဗျူးဖြေရပါမယ်။
2021 ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်တွင် Final Result သိရပါမယ်။
ပညာသင်ဆုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက(https://bit.ly/2JrAy7j) Link ကနေ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။